ခကျခဲကွမျးတမျးပွီး စှနျ့စှနျ့စားစား သှားရောကျလညျပတျခငျြသူတှအေတှကျ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှ စိတျဝငျစားဖှယျနရောမြား။ – SoShwe
Home/LifeStyle/ခကျခဲကွမျးတမျးပွီး စှနျ့စှနျ့စားစား သှားရောကျလညျပတျခငျြသူတှအေတှကျ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှ စိတျဝငျစားဖှယျနရောမြား။
ခကျခဲကွမျးတမျးပွီး စှနျ့စှနျ့စားစား သှားရောကျလညျပတျခငျြသူတှအေတှကျ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှ စိတျဝငျစားဖှယျနရောမြား။
၁။ ကမ်ဘာ့အမတျစောကျဆုံး တောငျထိပျမြားရှိသညျ့နရော Mount Thor, Nunavut, Canada
အမွငျ့ပေ (၅၄၉၅) ပရှေိတဲ့ Mount Thor ဟာ ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံးတောငျထိပျမဟုတျဘဲ အမတျစောကျဆုံး တောငျထိပျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကနဒေါနိုငျငံမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ တောငျထိပျဖွဈပွီး နှမျးဖတျကြောကျတှနေဲ့သာ ပွုလုပျထားကာ မွပွေငျကနေ ၁၀၅ ဒီဂရီခနျ့ တိမျးစောငျးနပွေီး ပပေေါငျး (၄၁၀၄) အရှညျမတျစောကျနတေဲ့ တောငျနံရံတှေ ရှိပါတယျ။ နောကျပွီး Mount Thor ဟာ ဝေးလံခေါငျသီတဲ့နရောမှာ တညျရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ တောငျတကျဖို့ စိတျအားထကျသနျနတေဲ့ အပြျောတမျး တောငျတကျတကျသမားတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးနရောပဲဖွဈပါတယျ။
၂။ ကမ်ဘာ့ အအေးဆုံးနရော Oymyakon, Russia
Oymyakon ဟာ ရုရှားရဲ့ သေးငယျတဲ့ မွို့လေးတဈမွို့ဖွဈပွီး လူဦးရေ (၅၀၀) ကြျောနထေိုငျကာ အပူခြိနျကတော့ (- ၉၆.၁၆ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ) အထိရှိပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ အအေးဆုံးနရောတဈခုအဖွဈ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။ ဆောငျးတှငျးမှာဆိုရငျတော့ (- ၅၆ ဒီဂရီ ဖာရငျဟိုကျ) အထိရှိကာ မွပွေငျတဈခုလုံးဟာ တဈနှဈပတျလုံး အေးခဲနတေတျပွီး မွို့ထဲမှာ တညျးခိုရနျ ဟိုတယျ (၁) လုံးသာ ရှိပါသေးတယျ။ လူကွိုကျမြားတဲ့ ကစားနညျးတှကေတော့ နှငျးလြှောစီးခွငျး၊ ရခေဲပွငျ ဟျောကီကစားခွငျးနဲ့ ငါးမြှားခွငျးတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
၃။ ကမ်ဘာ့အခွောကျသှဆေုံ့းနရော Atacama Desert, Chile
တကယျလို့သငျ့အနနေဲ့ ဒီကန်တာရကို ခရီးသှားမယျဆိုရငျ နရေောငျကာပစ်စညျးတှကေို မှနျမှနျကနျကနျ ယူဆောငျသှားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ NASA နဲ့ National Geographic ရဲ့ ဖျောပွခကျြတှအေရ ခြီလီမှာရှိတဲ့ ဒီ Atacama ကန်တာရမွကွေီးဟာ မားဈဂွိုဟျကမွကွေီးနဲ့ နှိုငျးယှဉျလို့ရပါတယျ။ ၁၉၀၃ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလကနေ ၁၉၁၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလအထိ Atacama ကန်တာရဟာ မိုးတဈစကျမှ မရှာခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့အရှညျကွာဆုံး မိုးခေါငျတဲ့ နရောဒသေအဖွဈ ကမ်ဘာ့မှတျတမျး တငျခဲ့ပါတယျ။
၄။ ကမ်ဘာ့အစှနျဆုံးအပိုငျးနဲ့ အနီးကပျဆုံးနရော Mount Chimborazo, Ecuador
ကမ်ဘာပျေါရှိ လူအမြားစုဟာ ကမ်ဘာ့အစှနျဆုံးနရောကို ရောကျဖူးကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ ကမ်ဘာ့အစှနျဆုံးနရောကို သှားခငျြတယျဆိုရငျ သငျ့မှာ ရှေးခယျြစရာ နှဈခုရှိပါတယျ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးကိုသှားမလား ဒါမှမဟုတျ အီကှဒေေါမှာရှိတဲ့ Chimborazo တောငျကိုသှားမလားဆိုတာပါပဲ။ Chimborazo တောငျဟာ ပပေေါငျး ၂၀၀၀၀ ကြျောမွငျ့ပွီး အသကျမဝငျတော့တဲ့ မီးတောငျတှလေညျးရှိပါတယျ။ Mount Everest ဟာ ပပေေါငျး ၂၉၀၀၀ ကြျော မွငျ့ပွီး ကမ်ဘာ့မကျြနှာပွငျပျေါမှာ တညျရှိကာ Mount Chimborazo ကတော့ ကမ်ဘာ့အလယျဗဟိုကနေ အစှနျဆုံးနရောမှာ တညျရှိပါတယျ။ Mount Chimborazo ကို တကျဖို့အတှကျ တောငျတကျလမျးတှေ မွောကျမွားစှာရှိပွီး တောငျထိပျမှာတော့ ဆီးနှငျးတှေ၊ မွူတှအေုံ့ဆိုငျးနပွေီး ရခေဲမွဈလိုမြိုး ဖွဈပျေါနပေါတယျ။
၅။ ကမ်ဘာ့အပူဆုံးနရော Lut Desert, Iran
Lut ကန်တာရမှာတော့ အပူခြိနျ (၁၅၈) ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျကြျောရှိပွီး အပူလှိုငျးတှလေညျး ဖွတျသနျးနခွေငျးကွောငျ့ ရောဂါဖွဈနိုငျခွနှေုနျး မွငျ့မားပါတယျ။ ဒသေခံတဈခြို့ရဲ့ ပွောပွခကျြအရ ဒီသဲကန်တာရမှာ ဂြုံပငျတှကေို ရကျအနညျးငယျကွာထားလိုကျမယျဆိုရငျ ပွာကသြညျအထိ မီးလောငျကြှမျးသှားတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
၆။ ကမ်ဘာပျေါမှာ သီးသနျ့တညျရှိနတေဲ့ Tristan da Cunha, United Kingdom
သငျ့ရဲ့ ပငျြးရိ ငွီးငှဖှေ့ယျကောငျးတဲ့ နစေ့ဉျဘဝကနေ လှတျမွောကျဖို့လမျး ရှာဖှနေပေါသလား ? ? ? လူကွိုကျမြားတဲ့ ကြှနျးတှကေိုလညျး မထေ့ားလိုကျပွီး ဝေးနိုငျသလောကျ အဝေးဆုံးမှာ သီးခွားတညျရှိတဲ့ အင်ျဂလနျ ရပေိုငျနကျဖွဈတဲ့ Tristan da Cunha ဆိုတဲ့ကြှနျးလေးကို သှားရောကျလညျပတျသငျ့ပါတယျ။ Tristan da Cunha နဲ့ အနီးစပျဆုံး ကုနျးမွဟောဆိုရငျ မိုငျပေါငျး ၁၇၅၀ ကြျောကှာဝေးတဲ့ အာဖရိကတိုကျဖွဈပွီး ပျေါတူဂီ စှနျ့စားရှာဖှသေူဖွဈတဲ့ Tristao da Cunha က ၁၅၀၆ ခုနှဈမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျးစုလေးမှာတော့ အိမျခွပေေါငျး ၃၀၀ ကြျောရှိပွီး လယောဉျကှငျးမရှိပါဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ Tristan da Cunha ကို သှားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ရကွေောငျးလမျးတဈခုတညျးကသာလြှငျ သှားလို့အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
၇။ ကမ်ဘာ့အအေးဆုံး တိုကျကွီးဖွဈတဲ့ အန်တာတိကတိုကျ
လူဦးရေ (၁၀၀၀) နဲ့ (၄၀၀၀) ကွားနထေိုငျပွီး ကမ်ဘာ့အအေးဆုံးနဲ့ အခွောကျသှဆေုံ့း တိုကျကွီးတဈတိုကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခရီးသှားလာသူတှအေနနေဲ့ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ ရခေဲပငျလယျကွီးကို ဖွတျသနျးပွီးမှသာ ရောကျရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး စွန့်စွန့်စားစား သွားရောက်လည်ပတ်ချင်သူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများ။
၁။ ကမ္ဘာ့အမတ်စောက်ဆုံး တောင်ထိပ်များရှိသည့်နေရာ Mount Thor, Nunavut, Canada
အမြင့်ပေ (၅၄၉၅) ပေရှိတဲ့ Mount Thor ဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်မဟုတ်ဘဲ အမတ်စောက်ဆုံး တောင်ထိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များတဲ့ တောင်ထိပ်ဖြစ်ပြီး နှမ်းဖတ်ကျောက်တွေနဲ့သာ ပြုလုပ်ထားကာ မြေပြင်ကနေ ၁၀၅ ဒီဂရီခန့် တိမ်းစောင်းနေပြီး ပေပေါင်း (၄၁၀၄) အရှည်မတ်စောက်နေတဲ့ တောင်နံရံတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး Mount Thor ဟာ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် တောင်တက်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အပျော်တမ်း တောင်တက်တက်သမားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကမ္ဘာ့ အအေးဆုံးနေရာ Oymyakon, Russia
Oymyakon ဟာ ရုရှားရဲ့ သေးငယ်တဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ (၅၀၀) ကျော်နေထိုင်ကာ အပူချိန်ကတော့ (- ၉၆.၁၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထိရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အအေးဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်တော့ (- ၅၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) အထိရှိကာ မြေပြင်တစ်ခုလုံးဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အေးခဲနေတတ်ပြီး မြို့ထဲမှာ တည်းခိုရန် ဟိုတယ် (၁) လုံးသာ ရှိပါသေးတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ ကစားနည်းတွေကတော့ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ ရေခဲပြင် ဟော်ကီကစားခြင်းနဲ့ ငါးမျှားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကမ္ဘာ့အခြောက်သွေ့ဆုံးနေရာ Atacama Desert, Chile
တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ ဒီကန္တာရကို ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် နေရောင်ကာပစ္စည်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ယူဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ NASA နဲ့ National Geographic ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေအရ ချီလီမှာရှိတဲ့ ဒီ Atacama ကန္တာရမြေကြီးဟာ မားစ်ဂြိုဟ်ကမြေကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကနေ ၁၉၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ Atacama ကန္တာရဟာ မိုးတစ်စက်မှ မရွာခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး မိုးခေါင်တဲ့ နေရာဒေသအဖြစ် ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
၄။ ကမ္ဘာ့အစွန်ဆုံးအပိုင်းနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးနေရာ Mount Chimborazo, Ecuador
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူအများစုဟာ ကမ္ဘာ့အစွန်ဆုံးနေရာကို ရောက်ဖူးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အစွန်ဆုံးနေရာကို သွားချင်တယ်ဆိုရင် သင့်မှာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းကိုသွားမလား ဒါမှမဟုတ် အီကွေဒေါမှာရှိတဲ့ Chimborazo တောင်ကိုသွားမလားဆိုတာပါပဲ။ Chimborazo တောင်ဟာ ပေပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်မြင့်ပြီး အသက်မဝင်တော့တဲ့ မီးတောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ Mount Everest ဟာ ပေပေါင်း ၂၉၀၀၀ ကျော် မြင့်ပြီး ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တည်ရှိကာ Mount Chimborazo ကတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုကနေ အစွန်ဆုံးနေရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ Mount Chimborazo ကို တက်ဖို့အတွက် တောင်တက်လမ်းတွေ မြောက်မြားစွာရှိပြီး တောင်ထိပ်မှာတော့ ဆီးနှင်းတွေ၊ မြူတွေအုံ့ဆိုင်းနေပြီး ရေခဲမြစ်လိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
၅။ ကမ္ဘာ့အပူဆုံးနေရာ Lut Desert, Iran
Lut ကန္တာရမှာတော့ အပူချိန် (၁၅၈) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်ရှိပြီး အပူလှိုင်းတွေလည်း ဖြတ်သန်းနေခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်း မြင့်မားပါတယ်။ ဒေသခံတစ်ချို့ရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဒီသဲကန္တာရမှာ ဂျုံပင်တွေကို ရက်အနည်းငယ်ကြာထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြာကျသည်အထိ မီးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
၆။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သီးသန့်တည်ရှိနေတဲ့ Tristan da Cunha, United Kingdom
သင့်ရဲ့ ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်ဖို့လမ်း ရှာဖွေနေပါသလား ? ? ? လူကြိုက်များတဲ့ ကျွန်းတွေကိုလည်း မေ့ထားလိုက်ပြီး ဝေးနိုင်သလောက် အဝေးဆုံးမှာ သီးခြားတည်ရှိတဲ့ အင်္ဂလန် ရေပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ Tristan da Cunha ဆိုတဲ့ကျွန်းလေးကို သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။ Tristan da Cunha နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ကုန်းမြေဟာဆိုရင် မိုင်ပေါင်း ၁၇၅၀ ကျော်ကွာဝေးတဲ့ အာဖရိကတိုက်ဖြစ်ပြီး ပေါ်တူဂီ စွန့်စားရှာဖွေသူဖြစ်တဲ့ Tristao da Cunha က ၁၅၀၆ ခုနှစ်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်းစုလေးမှာတော့ အိမ်ခြေပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး လေယာဉ်ကွင်းမရှိပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ Tristan da Cunha ကို သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေကြောင်းလမ်းတစ်ခုတည်းကသာလျှင် သွားလို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
၇။ ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးတိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့ အန္တာတိကတိုက်
လူဦးရေ (၁၀၀၀) နဲ့ (၄၀၀၀) ကြားနေထိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးနဲ့ အခြောက်သွေ့ဆုံး တိုက်ကြီးတစ်တိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလာသူတွေအနေနဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ရေခဲပင်လယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီးမှသာ ရောက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous အမြိုးသမီးတှသော သီးသနျ့နထေိုငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ပထမဦးဆုံးရှာငယျ။
Next ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာလအတှငျး တိုးတကျလာခဲ့သညျ့ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီးနိုငျငံတဈနိုငျငံရဲ့စီးပှားရေး။